အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မြန်မာ-အိန္ဒိယ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး အား? - Yangon Media Group
ရိခေါဒါရ်၊ သြဂုတ် ၁၆
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏(၇၂)နှစ်မြောက် လွတ်လပ် ရေးနေ့အခမ်းအနားကို မီဇိုရမ်ပြည်နယ် ကျမ်ဖိုင်းခရိုင်၊ ဇိုခေါထာရ် ကျေးရွာ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်တံတား(အိန္ဒိယဘက်)၌ သြဂုတ် ၁၅ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ကျင်းပပြီး နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး အားကစားပွဲနှင့်နယ်လှည့်ဆေးကုသမှုများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး နေ့အခမ်းအနားသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံရိုင်ဖယ်စစ်တပ်မှ တပ်ဗျူ ဟာမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် M.S. Mokha ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံဘက် နယ်မြေခံတပ်ဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်မှူးကြီးရဲကျော်ကျော်နှင့် ဟားခါးတပ်နယ်မှ ဗိုလ်မှူးကြီးနေမျိုး ဇော်တို့က တက်ရောက်အားပေး ကြသည်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက် အထက(ခွဲ)တီအိုချောင်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများက နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သီချင်းများသီဆိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ဗိုလ်မှူးကြီးရဲကျော်ကျော်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ အာသံရိုင်ဖယ် စစ်တပ်၊ တပ်ဗျူဟာမှူးဗိုလ်မှူးချုပ် M.S. Mokha တို့က အမှာစကားပြော ကြားကြသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံဒေသခံပြည်သူများနှင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်များမှ ချစ် ကြည်ရေးအားကစားပြိုင်ပွဲများ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြပြီး အားကစားသမားများအား ဆုများအသီးသီး ချီးမြှင့်ကာ ရိခေါဒါရ်မြို့တိုက်နယ် ဆေးရုံတာဝန်ခံ ဆရာဝန်ဒေါက်တာစန်းမာနှင့်သူနာပြုဆရာမများ၊ မြန်မာဘက်တပ်မတော်မှ ဆေးဗိုလ်ကြီးနှစ်ဦး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ အာသံရိုင်ဖယ်စစ်တပ် ဆေးဗိုလ်ကြီးသုံးဦးတို့က မြန်မာနိုင်ငံ ချင်းပြည်နယ် ရိခေါဒါရ်မြို့နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် ဇို ခေါထာရ်ကျေးရွာတို့မှ ပြည်သူလူ ထုများအား ကျန်းမာရေးအခြေအ နေစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ဆေးဝါးကု သခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြ ကြောင်း သိရသည်။